I-Wood Veneer + Fog Fireplace, I-Minimalist Eningi Ithezeka Ngakumbi | Umklamo we-Taihe Maitian
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / I-Wood Veneer + Fog Fireplace, I-Minimalist Eningi Ithezeka Ngakumbi | Umklamo we-Taihe Maitian
2020 / 10 / 26 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 843 0
"Ngifuna indlu enkulu enamafasitela amakhulu asukela ophahleni, lapho ukukhanya kwelanga kushaya phansi futhi kufudumeze izingubo zami zokulala." Ngisemncane futhi nginezinkumbulo ezinde, le ngoma evamile iye yaba ukubukeka kokuqala kwekhaya engangikulangazelela. Leli khaya elisha elithobekile, sibonga umklami, selenelise konke engikubhekise ekhaya: amafasitela amakhulu, ukukhanya kwelanga okufudumele, ukufunda ngokuthula, ikhishi elinephunga elimnandi …… konke kuhlobisa okuncane okuqhakaza injabulo. Okwamanje uvula umnyango wendlu yakho, uzobona ukukhanya kusuka ephaseji elimnyama. Isibani, ngefasitela lesifundo, ngomnyango wokungena, nami ngihlangana nethemba!
Umbono wokugcina wokungena kunguquko phakathi kwangaphakathi nangaphandle, futhi umuzwa wesiko uhlangana kancane kancane emzileni ohambayo othathwe ukukhanya nethunzi. Ingilazi yengilazi nomnyango wengilazi ngemuva kuhlunga ukukhanya okuvela esikhaleni futhi kugcinwe indawo esobala nevulekile. Imidwebo emihle ekhonjisiwe iletha ukunyakaza okwengeziwe nomoya wobuciko esikhaleni, okwenza umnyango ube yindawo encane yegalari yobuciko. I-facade engabonakali kanye nokukhanya okuhlala esikhaleni kubeka ithoni ezolile futhi emnene yekhaya enezendlalelo ezicebile, okwenza impilo isongwe ngenjabulo nenjabulo.
Umnikazi unesidingo sezikhala sehhovisi lasekhaya, ukutadisha nokuxhumana, umklami uhlele ihholo elenza imisebenzi eminingi. Isebenza njengesifundo, i-calligraphy, nehhovisi, futhi iyindawo enethezekile yengxoxo ejulile noma yokuphumula. Umklami ususe ngenhloso ukwakheka kwesifundo futhi waklama igumbi lonke njengebhuku lezincwadi, livaliwe noma livulekile, libukeka lingokoqobo futhi lingokoqobo. Ukwakheka okuvulekile nokulula kwe-façade, enezicabha zebhokisi lezincwadi ezahlukanisa umqondo womugqa wobukhulu besikhala senhloso elula, okunikeza isikhala isimo esilula nenhle. Uma ufuna ukuzitika ngomhlaba wakho, ungavala ngobumnene umnyango wesikrini ukuze uhlukanise nangaphandle kokuxhumana okunempilo. Olayini bomgwaqo phakathi kwalezi zikhala zombili zombili zivundlile futhi zimile mpo, futhi ziyageleza, okucebisa kakhulu intshisekelo nokusebenzelana kwesikhala.
Isinyathelo esisodwa ngasikhathi, ukubuka impilo, ukulindelwa kanye nomcabango wokuphila esikhaleni kuhlanganisiwe. Ukujula ongena ngaphakathi, kukhululeka ngokwengeziwe futhi kujabulise isikhala.
Ukubukwa okuhle kakhulu ekamelweni lokudlela, isiqondiso esisenyakatho-ningizimu siletha ukukhanya kwemvelo okukhanyayo okuvela ngaphandle, okunomphumela wokucaca owengeziwe esikhaleni. Esikhaleni esivuleke ngokuphelele, umklami ulawula ngokuqinile ubukhulu besikhala, futhi enengqondo uhlela ubukhulu befenisha, abumbe kabusha izinga nobudlelwano besikhala. Ifenisha yobuciko ibekwa ngokulandelana, okusebenzayo nokudlalayo. Ngemuva kwephaneli lokhuni egumbini lokuphumula, kunenani elikhulu lesikhala sokugcina, ngokugwema ngempumelelo imfuhlumfuhlu. Umnikazi, osehlale phesheya iminyaka eminingi, uthanda umuzwa ofudumele weziko. Umklami wasebenzisa isikhundla sabaphathi besakhiwo seKhabhinethi futhi wakha endaweni yokubasa enezinkungu, eshaya amalangabi, ukushisa umuzwa wokuba ngowekhaya.
Itafula ledwala lokudlela, itafula lokudla elenzelwe itafula elenziwe ngokwezifiso, ithebula lesibani esimhlophe esimhlophe, umuzwa olungile futhi othambile wokuvumelana usethwe waba isithombe sethenda kakhulu. Lapha futhi kuthwala ukudla kwezinkathi ezine komndeni wabathathu, noma okhanyayo noma ocebile, ngezikhathi ezithile enkundleni, ukunambitheka kwenhliziyo okunikeziwe, ukunambitha isisho sokwaneliseka, lokhu kuyinjabulo esobala yako! Phakathi kwegumbi lokudlela nekhishi kwephula imithetho ngaphandle komnyango, ukuthola ukusetshenziswa kwangempela kwempilo okufana nempilo, umuzwa wezinzwa ubonakala kuyo yonke imininingwane ethokozisayo.
Umnyango wesibonda sokhuni, uthwala umsebenzi wesikhala somphakathi kanye nokwahlukanisa isikhala semvelo somuntu siqu, okubonakala kuhleleka kuhlelekile okusanhlamvu kwezinkuni ngemuva. Lapho ubusuku buwela buthule, ngobumnene udonse emnyango wesibaya njengodonga lwesithombe, ukuze ukunyakaza nokuthula, imini nobusuku, kuhlukaniswe ngokukhaliphile. Zinganamatheliswa komunye nomunye noma ezizimele, endaweni yangaphakathi, ngumndeni wezikhala ezintathu zomuntu siqu. Isudi yomyeni nonkosikazi, igumbi labantwana negumbi lakhe lokufundela nendlu yangasese, akuphazamisani. Lokhu kwahlukaniswa okusebenzayo okukhethekile kungenzeka kungenxa yesakhiwo sokuqala, zimbalwa kakhulu izindonga ezingasuswa. Ngokuhleleka okunengqondo kwezindawo ezisebenzayo, umklami wahlukanisa iphaseji langaphakathi laba izingxenye ezimbili, wafinyeza ibanga elibonakalayo phakathi kwamaphaseji futhi kancane kancane aletha amazinga ahlukene wesipiliyoni esikhaleni.
Ikamelo lokulala eliyinhloko lilula elihlanzekile, elikhanyayo futhi elilula. Isibani, incwadi nombhede indawo yonke yasebusuku, noma yikuphi ukubuyela emuva.
Isikhala segumbi labafana simpunga nomhlophe, isikhawu esimhlophe nomnyama, simhlophe njengobumsulwa bakhe, mpunga njengemicabango yakhe, futhi omnyama, njengolwazi lonke, konke kuzohlangana ngemuva kobuhlakani buthule.
Ukulula okulula, lapho uzokwazi ukubona ubunjalo bezinto. Ngakho-ke, ekwakhiweni kwekamelo lokulala, sisebenzisa amasu alula futhi aqondile ukugwema ukwakheka kwenqwaba nokwethula izimfanelo zesikhala uqobo ngokuthungwa okwehlukile kwezinto zemvelo. Izinga elilula nelicebile elilingana nhlangothi-ntathu lesizinda sokumodela, ukukhethwa kwelineni elisezingeni lesimanje lombhede, imidwebo emihle yesimanjemanje, ubungako bombala wendwangu entofontofo, nendawo kanye nezinguquko ezinhle zezinto, ikhwalithi yempilo ayizivezi. Okumhlophe okumsulwa, okumpunga nenhle futhi okufudumele oku-nsundu okusawolintshi, ngaphansi kokusebenzisana kwalaba abathathu, kunengxoxo yezinhlangothi ezehlukene nesikhathi nendawo, okukhipha ubumnene obulula nobuthambile besikhala sesimanje kuze kufike ezingeni eliphezulu kakhulu nokwakha isitayela esiyingqayizivele sokuhlala .
Besihlale sikholelwa ukuthi impilo nobuciko azikho ngokwehlukana, kepha zingabalingani abahambisanayo ohambweni olufanayo. Asifuni ukuthi abanikazi babe nempendulo yesitayela esezingeni elifanele, futhi asifuni ukwakha igumbi lemodeli elingaguquguquki. Ngoba izimpahla akufanele zivinjelwe ngesitayela, isikhala kufanele futhi sihlanganise bonke abantu, sihambisane nezintandokazi nemikhuba yalabo abahlala khona. Yikho kuphela lokhu "kungqubuzana" okudala ukugqabhuka kwesikhala sokwenza ngcono ikhaya.
Igama Lephrojekthi: Plain-Jane
Indawo: I-Ningbo-ART Lanshan
Indawo yephrojekthi: 218m2
Kuklanywe ngu: Taihe Maitian
Imenenja yePhrojekthi Yokuklama: Min Wu
Idizayini yephrojekthi: Qianqian Zhang
Kuklanywe nguChen Chen Ma
Umbhalo: Pan Zhi
Isithombe ngu: Park Yen
Edlule :: Amamitha ayi-50 Esikwele Wendlela Yesimanje Yesitayela Esiphezulu, Amathuba Okuvula Ihhovisi Okungenamkhawulo | IJUDESIGN House Union Design Olandelayo: Kuyi-Minimalism Egxile Ekuphileni Okumuhle Okuphakade
Ubuciko Obungaphezulu Kokuphila: Hefei Izakaya Restaurant | Idizayini Ku-The Bund
Amathiphu Wakho Okuthenga Ompompi Abalungile
Lena Incazelo Ephelele Ngetshe Le-Ultra-Thin!
Amamitha ayi-160 Esikwele eBeijing, Uhlala Wedwa, Lokho Kuphila Okuphezulu!
Amamitha ayisikwele angama-78 Umndeni Wabane, Lo Mklamo Uphezulu Kodwa Futhi Khombisa Okukhulu!